ज्ञानेन्द्र तामाङ | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 4
Home >> Author Archives: ज्ञानेन्द्र तामाङ (page 4)
कुमकुम भाग्यका चर्चित नायिका ‘प्रज्ञा’ नेपाली हुन ?
अहिले भारतीय च्यानलमा नम्बर वान सिरियल बनेको छ ‘कुमकुम भाग्य’ । माया र परिवारको कथा यो सिरियलकी चर्चित नायिका प्रज्ञा (श्रीति झा) के नेपाली हुन ? बेलाबेलामा यो चर्चाले नेपामा राम्रै हल्ला फैलाउने गरेको छ । उनलाई नेपालमा जन्मिएकी नेपालकी छोरी हुन भन्ने कथन तपाईले पनि सुन्नुभएकै होला । कतिपयले त उनी नेपालको सर्लाहिमा जन्मिएकी र पछि भारत गएकि पनि भन्ने गरेका छन ।
तर खासमा उनी नेपालमा जन्मेकि होइनन् । उनी भारत बिहार राज्यको बेगुसराई दसभंगामा जन्मिएकी हुन । बास्तविक नाम श्रिति झा रहेकी उनी सन १९८६ फेब्रुअरी २६ मा जन्मिएकी हुन । उनले आफ्नो बाल्यकाल पनि कलकत्तामा बिताएकी हुन । करिब १० बर्ष कोलकत्ता बसेकि श्रीतीले प्रराम्भिक शिक्षा पनि त्यहि लिएकी हुन ।
त्यसपछि उनी उनका ब्यापारी परिवारसँगै काठमण्डौ आएकी हुन । काठमण्डौमा उनले केहि बर्ष बिताएकी छिन । काठमण्डौमा रहदै उनले आफेनो स्कुलिङ पुरा गरेकी हुन । उनले काठमण्डौको मोडर्न इन्डियन स्कुल काठमण्डौमा केहि बर्ष अध्ययन गरिन् । त्यसैले उनलाई नेपाली भन्नेहरु धेरै नै छन । उनी नेपाली राम्रैसँग बोल्न सक्छिन । नेपाली परिवेश र संस्कृतिलाई नजिकबाट चिनेकी उनले बेलाबेलामा नेपालबारे प्रतिक्रिया पनि दिने गरेकी छिन । यसरी नेपालमै जन्मिएको नभई उनी नेपालमा केहि बर्ष बसेकि हुन परिवारसँगै । नेपालबाट फर्किएपछि उनी लक्ष्मण पब्लिक स्कुल देल्लीमा पढेकी थिइन् ।
सन २००६ मा धुम मचाओ धुम बाट भारतीय टिभीमा झुल्किएकी उनी अहिले चर्चित बनिसकेकी छिन । हाल कुमकुम भाग्यबाट दर्शकले उनलाई राम्रैसँग चिनिसकेका छन । बुझिएअनुसार उनी छिट्टै बलिउड फिल्ममा पनि देखिनेछन ।
निर्देशकको जन्मदिनमा ‘ए मेरो हजुर २’ को गीत रिलिज
नायिकाबाट निर्देशक बनेकि झरना थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ को टाइटल गीत रिलिज गरिएको छ । आइतबार थापाको जन्मदिनको अवसरमा राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले गीत सार्वजनिक गरेको हो । बिश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल लगायत उच्च भेगमा खिचिएको गीतमा उच्च मेकिङ झल्किएको छ ।
गीतमा फिल्मका दुई मुख्य कलाकार साम्रज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र सलिन मान बाँनिया फिचरिङ छन । सलिनको यो डेब्यु फिल्म हो । गीतमा देखिएको उनको लुक्स र पर्फमेन्सले फिल्म उद्योगमा एक आशालाग्दा प्रतिभा उदाएको मान्न सकिन्छ । गीतमा सुगम पोखरेलको स्वर तथा कल्याण सिहंको सँगीत रहेको छ ।
सुनिल कुमार थापा निर्मित फिल्ममा सलोन बस्नेत, अम्बर सुवेदी, सुमन पौडेल, अजश्रा ढुङ्गाना लगायत मुख्य भुमिकामा छन् । फिल्म सेप्टेम्बर १ अर्था भदौ मा रिलिज हुनेछ । रिलिज मिति पनि आइतबारको कार्यक्रममा अफिसियल घोषणा गरिएको हो ।
अनमोलको बिहे गरिदिने इच्छा छ । भुवनलाई सम्झिन्न : सुस्मिता केसी
अभिनेत्री सुस्मिता केसी सँगको यो ताजा कुराकानी हेर्नुहोस ।
‘निर्भय’ सुटिङको बेला ज्यानै जान सक्थ्यो : निखिल उप्रेती
एक्सन हिरो निखिल उप्रेती हिजोआज फिल्म ‘पिञ्जडा ब्याक अगेन’को सेटमा ब्यस्त छन । केहि दिनयता उनी चितवनको सौराहामा यो फिल्मको छयांकन गर्दैछन । त्यसैले उनले यसै शुक्रबारबाट रिलिजमा आउन लागेको चलचित्र ‘निर्भय’को प्रमोसनका लागि पर्याप्त समय दिनसमेत पाएका छैनन् । तर उनले समयलाई ब्यवस्थापन गरेरै भएपनि निर्भयको पब्लिसिटी गरिरहेका छन ।
केहि दिनअघि चितवन र बुट्वलमा पनि उनी ‘निर्भय’को प्रचारमा पुगे । हाल सौराहामै रहेका उनले आजभोली निर्भयबारे एक रोचक अभिब्यक्ति दिदै आएका छन । सम्वभत आजभोली उनले हरेक अन्तरवार्तामा भन्ने गरेका छन : ‘निर्भय’ सुटिङको बेला हातीमाथी खिचिएको समर सट, जसले अन द स्पट डेथ हुन सक्थ्यो । उनी स्वयमले त्यो जोखिम मोलेका हुन ।
उनले आफुहरुलाई त्यो खतराको बारेमा थाहा नभएकाले खासै ठुलो कुरा नलागेपनि पछि हातीबिज्ञहरुबाट थाहा पाएपछि झस्किएको बताए । थप कुराकानी भिडियो अन्तरवार्तामा ।
जेठ १९ मा ‘रातो घर’
फिल्म ‘रातो घर’को रिलिज मिति तय भएको छ । अर्को बर्ष जेठ १९ गते फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भएको हो । फिल्मको छयांकन सकिएको लामो समय पछि मात्रै रिलिज मिति घोषणा गरिएको हो । निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बोले जेठ १९ मा फिल्म प्रदर्शनमा आउने पक्का गरे ।
माङहिम फिल्मस् र तक्मे प्रोडक्सनको संयुक्त निर्माण रहेको फिल्म ‘रातो घर’ मा विल्सन विक्रम राई, गौरव पहारी, संयम पुरी, अनुराग कुँवर, माला लिम्बु, विकेश श्रेष्ठ, भानु प्रताप लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मको पुर्वका विभिन्न स्थानमा छयांकन गरिएको छ ।
सलोन अब गायक पनि । ‘बाबुकान्छा’को गीत गाए
अहिले चर्चामा रहेका नयाँ पुस्ताका हिरो सलोन बस्नेत अब गायक बनेका छन । बाल्यकालदेखि नै अभिनयमा निखारिएका उनी अब गायकको रुपमा पनि दर्शक स्रोतामाझ चिनिनेछन् । उनले हालै होम प्रोडक्सनको नयाँ चलचित्र ‘बाबुकान्छा’का लागि गीत गाए । बुवा शोभित बस्नेतले निर्माण निर्देशन गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘बाबुकान्छा’का लागि उनले चन्द्रमाझै राम्री छौ बोलको गीत हालै रेकर्ड गराए । गीतमा उनलाई अहिलेका ब्यस्त गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छिन । गीत यसअघि शोभितकै चलचित्र कर्णवीरमा समावेश पुरानो गीतको रिमिक्स भर्सन हो । गायक तथा संगीतकार ओम सुनारले गीतलाई रिमिक्स गरेका हुन । गीतको ओरिजिलन भर्सनमा स्वर सँगीत लक्ष्मण शेषको रहेको थियो । सुपरहिट भएको फिल्म कर्णवीरको सफलतालाई पुनर्ताजगी गराउन गीतलाई रिमिक्स गरिएको निर्देशक शोभित बस्नेतले बताए । त्यस्तै गीत गाउदा फरक अनुभव भएको सलोनको भनाई छ । केहि नयाँ गर्ने चाहना भएको र सबैको प्रेरणाले फिल्मको गीत गाएको उनले बताए ।
शोभित केहि समयको ग्यापपछि निर्देशनमा आएका हुन । उनको होम प्रोडक्सनको ‘बाबुकान्छा’ छिट्टै छयांकनमा जाने तयारी छ ।
दयाहाङ तामाङ, केकी बाहुनी । ‘घामपानी’ ट्रेलर
चलचित्र ‘घामपानी’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्म समिक्षक दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको फिल्ममा दयाहाङ राई तामाङ युवाको भुमिकामा छन । त्यस्तै केकी अधिकारी बाहुन युवतिको भुमिकामा छिन । तामाङ र बाहुन युवायुवतिको प्रेम नै घामपानीको कथा रहेको ट्रेलरबाट बुझ्न सकिन्छ ।
मौलिक कथामा बनेको फिल्ममा दया र केकीको अलवा अकित खड्का, प्रकाश घिमिरे, पुस्कर गुरुङ लगायतको अभिनय छ । लामो समय फिल्म समिक्षामा कलम चलाएका दिपेन्द्रको यो डेब्यु निर्देशन हो ।
बहुप्रतिक्षित सिक्वेल ‘बाहुबली २’ को ट्रेलर रिलिज । भिडियो
सम्भवत अहिले दर्शकमाझ सर्वाधिक प्रतिक्षाको फिल्म कुनै छ भने त्यो हो ‘बाहुबली २’ । दक्षिण भारतीय प्रोडक्सन भए पनि फिल्मलाई संसारभरका दर्शकले प्रतिक्षा गरिरहेका छन । नेपालमा पनि यो फिल्मको ठुलो प्रतिक्षा छ । यहि फिल्मको ट्रेलर आज सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माण कम्पनी धर्मा प्रोडक्सनले फिल्मको २ मिनेटभन्दा लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।
ट्रेलरले फिल्म एैतिहासिक कथामा एक्सनप्रधान छ भन्ने बुझाउछ । फिल्मको कथा ‘बाहुबली’कै निरन्तरता हो । प्रभाष, राना दग्गुबति र अनुष्का शेट्टी लगायत कलाकार छन । फिल्मलाइृ एमएस राजामौलीले निर्देशन गरेका हुन । लामो समयको संघर्षपुर्ण तयारीपछि फिल्मको सिक्वेल तयार भएको हो । फिल्म आउदो अप्रिल २८ मा बिश्वब्यापी रिलिज हुनेछ ।
चितवनमा ‘दर्पण छाया २’ कलाकार
प्रदर्शनरत चलचित्र ‘दर्पण छायाँ २’ प्रोमोशनको लागी चितवन पुगेको छ । चलचित्रको प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि निर्माता रबि गदाल कार्की निर्मात्री सबु कार्की ,चलचित्रका कलाकार पुष्पल खड्का , साहारा कार्की , श्रध्दा प्रसाई , फिरोज तिमल्सीना लगायत कलाकारहरु चितवनको नारायणगढमा दर्शकसँगै फिल्म हेर्न पुगेका हुन । उनीहरुले चितवनका हलहरुमा पुगेर दर्शक प्रत्रिक्रिया लिएका थिए । सो टीमले चितवनका पत्रकारमाझ फिलमबारे जानकारी समेत गराए । फिल्मका कलाकार पुष्पल, साहारा, फिरोज, श्रद्धा ले फिल्मले युवायुवतीको कथालाई कलात्मक तरिकाबाट देखाइएको कारणले सबैको मन छुने कुरा व्यक्त गर्दै नयाँ कलाकार भएता पनि कथालाई न्याय गरेको हुँदा फिल्म अत्यन्तै राम्रो बनेको बताए । फिल्मलाई बरिष्ट निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन, संगित रञ्जित गजमेर र चन्दन लोम्जेलको रहेको छ भने नृत्य निर्देशन छुन्डुप लामाको हो ।